Nke a bụ Tribtụ, nye Kasị Ukwuu Blog Post na ...wa ... | Martech Zone
Nke a bụ Tribtụ, nye Kasịnụ Blog Post na World World
Nke a bụ ọ bụghị blog kachasị ukwuu n'ụwa greatest nooo… this is just a Tribute.
Egwuregwu niile, ewepụrụ m 3 post drafts n'ụtụtụ a. Ha bu ndi edeputara nke m malitere n’oge gara aga mana enweghi m ike ichota ha ka ha wee biputa. Ikekwe otu n’ime ha kasị ukwuu post n'ụwa. Anyị agaghị ama. Otu bụ iji blọọgụ tụnyere ngbanwe nke akwụkwọ akụkọ. Nke abụọ bụ na nguzozi nke ndu na mmekorita maka igbu. Nke atọ bụ ọkwa na-akatọ ụlọ ọrụ Direct Mail iji atụnyere ozi ejula na email.
Maka gị ndị na - ede blọgụ na - anọghị ebe ahụ, kedu ugboro ole ị na - edegharị ma ọ bụ hichapụ akwụkwọ ozi kpamkpam tupu ibipụta ya? Enwere m ike ịtụ 1 ma ọ bụ 2 otu izu.
Tags: ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụabụ kasịnụ n’uwajaak nwaihe siri ike dụtụ
Jiri Amamihe Ma Zere Captcha
Jul 15, 2007 na 11: 59 AM
Ekwesiri m ikweta na enweghị m ụdị ọfụma ọ bụla nke 'ide ede' nka m jọrọ njọ nke na mbọ ọ bụla m nwere ịmata ụda na-ebelata mkpụrụedemede = 0. Ana m eme oge ụfọdụ iji nka edere ede nke ezigbo nwunye m belata asusu njehie larịị site na 'egwu' ruo 'ọkwa dị ala' mana ọ na-ewute ya na ọ bụghị mgbe niile ka m kwesịrị 'ịga ndụ'
Echere m na nkà Bekee m na-emetụta agụ akwụkwọ m? Amaghị m, ndị mmadụ anaghị abịa gụọ edemede m n'ihi etu esi ede ya, yabụ kedu mgbe ụtọasụsụ / nsụpe ọjọọ na-etinye ndị mmadụ? M doro anya na amaba na ndị omimi ma.
Enwere m ederede a na - agwụbeghị nke nwere ike ịdịgide ruo mgbe ebighi ebi naanị n'ihi na echere m na ha bụ echiche ọjọọ n'ozuzu ha ọ bụghị n'ihi ọdịnaya dị n'onwe ya.
Jul 15, 2007 na 12:50 PM
Tọ asụsụ bụ ikiri ụkwụ Achilles m, Nick. M na-elekarị post ma gbanwee ya ugboro 5 ma ọ bụ 6 tupu m bipụta ya. Mgbe m bipụtara ihe m dere, mgbe ụfọdụ, m ga-edezi mmezi nke ụtọasụsụ ọzọ.
Enweghị m nwunye iji lelee ọrụ m… mana enwere m ike ị nweta ego editọ otu ụbọchị. Nke ahụ ga-amagbu onwe ya!
Jul 15, 2007 na 11: 24 AM
Ekwesịrị m ịsị na ọ bụ ntakịrị ihe na-adịghị mma na ị na-elekọta ubu m… kedụ ka o si bụrụ na ị maara na mhichapụ 3+ drafts nke na-abụghị 'tunable'? Huh?
Jul 15, 2007 na 12:48 PM
Ikekwe, ọ bụ ụfọdụ izu ụka nhicha na abụọ anyị akụkụ, Papa! 🙂
Jul 15, 2007 na 6:41 PM
Ọ dịkarịa ala otu ụbọchị, kwa blọgụ m na-ede. Mgbe ụfọdụ ọ na - adị nfe dịka aha ya. Iwu isi mkpịsị aka m bụ na ọ bụrụ na enweghị m ike ịme ka aha ahụ na-adọrọ adọrọ, ma ọ dịkarịa ala, ọ na-aga ide ọnọdụ.
Jul 16, 2007 na 8:59 PM
Naanị m chọtara BLOG gị wee chọpụta na ị bụ onye edemede na - eme ọfụma. Ihe ịma aka kasịnụ m na-enweta bụ ịga na-aga n'okporo ụzọ na-ekwe omume na usoro a.
Amalitere m BLOG n'April nke 07, afọ a. Na m nwere oge ebe m n'ezie n'ike mmụọ nsọ na ndị ọzọ ebe m blahhh! Enweela m oge ole na ole ebe echiche dị mkpirikpi ghọrọ ihe efu.
Are bụ mmụọ nsọ maka m n'agbanyeghị… na ekele gị! Site na otu Tenacious D Fan gaa Ọzọ… 🙂
Jul 17, 2007 na 2:42 PM
Just mere ụbọchị m, Christina! Daalụ! Na Rock On! 😉
Jul 16, 2007 na 8:01 PM
Ebe ọ bụ na m malitere, nke na-abụghị nke ahụ ogologo oge gara aga, ọ dị m ka m na-achọ 2: 1 na-arụ ọrụ maka m ntụgharị site na echiche 2 mbụ m bipụtara otu na nke ọzọ na-agaghachi na drafts. Naanị m na nso nso a malitere idebe drafts maka mbipụta m mechara, wee hụ usoro ahụ dị ka onye na-adịghị agbanwe agbanwe.
Kedụ ka ị ga - esi dozie idebe ihe iji rụọ ọrụ na ịghara ịhapụ ha ka ha mee agadi, ma kweta na izu bụ ogologo oge na ntanetị? O doro anya na isiokwu metụtara ya, mana ọ nọ na-eche ma ịkwesịrị ịkwatu ọtụtụ ihe omume nwere ike ịdị n'ihi na ha emeela agadi.
Ee ee, m na-ahụchalụ ma mee mgbanwe na ya ihe dị ka ugboro 4 ruo ugboro 5, tupu emesịa zipu ya ebe ahụ.
Jul 17, 2007 na 2:41 PM
Ọ dị mma ịmara na anọghị m naanị m, Ville!